Yini-ke nokuthi ukuhlelwa inethiwekhi nokuphathwa? Kuyinto uhlelo ukuthi ukuzixazulula izinkinga bekuhlela, ukuphathwa kanye nokuthuthukiswa izakhiwo ezinkulu emnothweni kazwelonke, ukucwaninga kwesayensi, ukulungiselela zobuchwepheshe kanye nomklamo ukwenziwa izinhlobo ezintsha imikhiqizo, kabusha ubudala futhi ekwakheni izakhiwo ezintsha, ukulungiswa enkulu ezimpahleni ezingasuki phansi esebenzisa inethiwekhi omsebenzi.
ukuhlela Network ikuvumela ukusungula ubuhlobo ngqo phakathi umsebenzi kuhlelwe futhi imiphumela kungenzeka kubangelwa ekuqalisweni kwalezi imisebenzi ukuthola. Futhi-ke ikuvumela ukubala ngokushesha futhi ulungise isu noma yimuphi umsebenzi. ukuhlela Network - isisekelo sokuthethelelwa ukusetshenziswa ubuchwepheshe bama-computer ekuphathweni ukukhiqizwa futhi ukudalwa okuzenzakalelayo zokulawula. Lokhu ubuchwepheshe ikuvumela ukuba yilo-human resources ngaphezulu, simatasa umdwebo amapulani indinganiso ngaphezulu umsebenzi wokudala.
Uxhumano izindlela zokuhlela kukhona ukusungula okunengqondo imodeli zezibalo into, run a imodeli inethiwekhi noma umdwebo, kukhunjulwa ikhompyutha nokucabangisisa isikhathi ubuhlobo futhi zonke izinqubo ezenzeka ekwenzeni imisebenzi eziyinkimbinkimbi.
Isheduli Network ekuqaleni elungiselelwe esebenzisa ubuchwepheshe bama-computer kanye mathematics isicelo, bese esetshenziswa ngenjongo ukuphathwa zokusebenza kanye nomsebenzi kunhlangano. Kugrafu ezibonisa izenzakalo kanye nomsebenzi. Izinkundla ephawula noma ekuqaleni noma ekupheleni umsebenzi othize, futhi umsebenzi uqobo eveza isenzo, Umsebenzi zazo kudingeka kuthuthwe kusukela umcimbi ekulandulayo elandelayo. Izenzakalo igrafu ufanekiselwe imibuthano, futhi umsebenzi ngesimo imicibisholo, ebonisa ubudlelwano phakathi izenzakalo (okuphambene nalokho nakho okufushane kungenzeka yesithombe: Amahora - imibuthano, kanye nemicimbi zabo ngibopha - imicibisholo).
ukuhlela Network kudinga ethize, kucace umsebenzi izincazelo ekhombisa umculi ngamunye wabo, ecacisa sikhathi, okuyinto ulinganiswa izinsuku, amasonto, emashumini, izinyanga kanye sisetshenziswa phezu umcibisholo. Isikhathi ilinganisela ukwenza executors loMkhandlu imisebenzi elihambisana. Zonke imisebenzi, okuyinto eyenziwa usohlelweni, kuyogcina kubangele tseleplanirovaniyu. Uxhumano uhlela isikhathi umsebenzi kudinga ukusetshenziswa hhayi kuphela kwemibhalo normative, kodwa eqinisekisa idatha yayo zokuhlola.
Kodwa ngokuvamile, ikakhulukazi uma kwenziwe ekuthuthukiseni iinkambiso zemikhiqizo emitjha ukuthi ukusebenza ayinakubhalwa usebenzisa izibalo olulodwa okuthembekile. Ezimweni ezinjalo, inkontileka kufanele ahlinzeke izilinganiso ezintathu:
1) ukulinganisela okuhle ngendlela engakholeki. Isikhathi esincane umsebenzi, kungenzeka izimo ezikahle kakhulu, uma kwenzeka ukuthi akukho muntu futhi akukho lutho kuzovimbela ekwenzeni lokho okuhleliwe.
2) Ukulinganisela engenathemba. Isikhathi esiphezulu ukuthi kungase kudingeke ukuba enze umsebenzi, uma nobunzima.
3) Cishe iningi ukulinganisela. Ikhombisa isikhathi ukuthi uzobe wachitha ngaphansi kwezimo yokusebenza ejwayelekile.
Omunye izici ezibalulekile ekwakheni uhlelo - izindlela isikhathi. Izindlela zihlukaniswe ephelele futhi esibucayi. indlela Okugcwele - umugqa eqale - inethiwekhi yomcimbi wokuqala, futhi ekugcineni - umcimbi yayo evelele. Indlela ezibucayi - isikhathi eside, ephawula isikhathi kujeziswa zonke imisebenzi iphrojekthi, ie isikhathi uzobe wachitha ukufeza umgomo oyinhloko.
Indlela ezibucayi - ke isici esibaluleke kunazo lonke isofthiwe inethiwekhi management system futhi isisekelo ukhethe icebo efaneleke kakhulu enhlanganweni kanye nokuqapha ukuqaliswa kwemisebenzi.